Yiziphi izindlela zokuhambisa ozisebenzisayo?
Sisebenzisa iRoyal Mail kumakhasimende aphesheya kanye namakhasimende ase-UK, iRoyal Mail ne-DPD.
Angitholanga isixhumanisi sokulandela umkhondo, ipasela lami likuphi?
Kufanele ngabe uthole inombolo yokulandelela ku-imeyili yakho yokuqinisekisa ukuthunyelwa. Ngokuya ngokuthi iyiphi indlela oyikhethile yokuposa, uzokwazi ukusebenzisa le nombolo kufayela le-
Isixhumanisi sokulandela i-DPD - https://www.dpd.co.uk/service/
Isixhumanisi sokulandela umkhondo seRoyal Mail - https://www.royalmail.com/track-your-item#/
Yini okufanele ngiyenze uma into yami ingakahanjiswa?
Idethi yakho elinganiselwe yokulethwa ikwi-imeyili yakho yokuqinisekiswa kwe-oda - sicela uvumele kuze kube yilolu suku ukuze i-oda lakho lifike.
Uzokwazi ukuthola izibuyekezo zakamuva ku-oda lakho ngokuchofoza isixhumanisi sokulandela ngomkhondo ku-imeyili yakho yokuqinisekisa ukuthunyelwa. Ngenye indlela, ungangena ku-'Akhawunti Yami 'bese uqhafaza ku-'Track This Order'.
Isixhumanisi sakho sokulandela ngomkhondo sizokwazi ukuhlinzeka ngolwazi olusesikhathini ngesimo se-oda lakho.
Uma usuku lwakho lokulethwa olulinganiselwayo seludlulile futhi awulitholanga i-oda lakho, sicela uxhumane nalo ku- sales@sarmsstore.co.uk
Ngingalandelela ukulethwa kwe-oda lami?
Uma i-oda lakho lithunyelwe kuwe usebenzisa isevisi elandelwayo, ungalandela uhambo lwayo oluya kuwe. Uzothola i-imeyili yokuqinisekisa ukuthunyelwa evela esitolo sethu lapho i-oda lakho lisendleleni; mane uchofoze kusixhumanisi sakho sokulandela kule imeyili ukuze ubuke ukulandelela okusesikhathini.
Ngicela iphasela lami liqondiswe kwelinye ikheli?
Ngokuphepha kwakho asikwazi ukushintsha ikheli othunyelwa kulo i-oda lakho. Ungakhathazeki - uma ungekho lapho ukulethwa kuzanywa khona umlingani wethu wokulethwa uzoshiya ikhadi eleluleka ukuthi uhlela kanjani ukuphinde uthumele noma lapho ungalanda khona iphasela lakho.
Kwenzekani uma ngingekho lapho i-oda lami lifika?
Othile udinga ukungena lapho iphasela lakho kufanele lilethwe njengoba singadinga ukusayina. Kodwa-ke, ungakhathazeki uma lokhu kungenzeki njengoba umlingani wethu wokuletha ngokuvamile azama ukuletha ngaphezu kokukodwa.
Ngenye indlela bazoshiya ikhadi eliqinisekisa ukuthi balishiyile kumakhelwane, balishiya endaweni ephephile, lapho bezozama ukuphinde banikeze noma bakunikeze imininingwane yokuthi ulilanda kanjani.
Isimo se-oda lami sithi “asigcwalisekanga” kungani singakathunyelwa okwamanje?
Uma isimo se-oda lakho sikhombisa ukuthi 'asigcwalisekanga, ”kusho ukuthi simatasa silungisa i-oda lakho ndawonye ukuze lilungele ukuthunyelwa.
Ngezikhathi ezimatasa, lesi simo singavela ku-oda lakho isikhathi eside kunokujwayelekile. Idethi yakho yokulethwa elinganiselwayo ikwi-imeyili yakho yokuqinisekisa i-oda lakho futhi ifaka phakathi nesikhathi esisithathayo ukupakisha i-oda lakho.
Uzothola enye i-imeyili lapho sikuthumela i-oda lakho, elizofaka isixhumanisi sokulandela umkhondo uma i-oda lakho lithunyelwe nolunye lwezinsizakalo zethu zokulethwa okulandekayo.
Ngabe ukupakisha kwakho kubukeka kanjani?
Siqinisekisa ukuthi konke ukupakisha kwethu kuqondile, ngaphandle kwezitika ezichaza igama lenkampani kanye nokupakisha okusobala.
Ngingakwazi ukuchibiyela i-oda lami ngemuva kokuthi ngilibekile?
Sishesha impela ekupakisheni i-oda lakho, okusho ukuthi ngeke sikwazi ukushintsha i-oda lakho uma usulenzile. Lokhu kufaka phakathi ukuguqula inketho yokulethwa, ikheli lokulethwa noma imikhiqizo ngokulandelana.
Ngi-ode okuthile ngengozi, ngenzenjani?
Njengoba singeke sashintsha i-oda uma usulibekile, futhi uthola into ongayifuni. Sicela usazise ku sales@sarmsstore.co.uk. Ungayibuyisela kithi, futhi sizobuyisa imali noma sishintshe i-oda lakho ngokushesha nje lapho selibuyile endaweni yethu yokugcina izimpahla.
Sicela ufake inothi kupasile yakho usazise ukuthi ufake i-oda ngokungalungile lapho ulibuyisela emuva. Cela ubufakazi bokuposa bese uqinisekisa ukuthi uyigcina iphephile uma kwenzeka sidinga ukuyibheka ngokuhamba kwesikhathi.
Nginento engalungile ku-oda lami, ngenzani?
Sifuna ukuhlunga noma yiziphi izinkinga ngezinto ezingalungile.
Uma enye yezinto oyitholile kungeyona oy-odile, sicela usazise ku sales@sarmsstore.co.uk, futhi sizokuthumela into yakho efanele ngokushesha okukhulu. Sizokucela ukuthi usithumele emuva ngento engalungile.
Sicela ufake inothi kupasile yakho usazise ukuthi alilungile uma ulithumela futhi. Cela ubufakazi bokuposa bese uqinisekisa ukuthi uyigcina iphephile uma kwenzeka sidinga ukuyibheka ngokuhamba kwesikhathi.
Ngiphuthelwa into nge-oda lami, ngenzani?
Uma into ilahlekile, sicela uxhumane nathi ku- sales@sarmsstore.co.uk ngenombolo ye-oda negama lento elahlekile. Sizokuxazululela lolu daba ngokushesha okukhulu.
Umkhiqizo kanye ne-Stock
Ngingazifuna kanjani izinto kuwebhusayithi?
Uyazi ukuthi ufunani? Uma kunjalo, thayipha ebhokisini lokusesha phezulu ekhasini ngalinye bese uqhafaza engilazini yokukhulisa.
Unganginika eminye imininingwane ngemikhiqizo yakho?
Sizama ukukunikeza imininingwane ewusizo kakhulu ngangokunokwenzeka ngayo yonke imikhiqizo yethu, kufaka phakathi:
Izitifiketi zokuhlaziywa ezivela kumthombo ovela eceleni.
Incazelo ejwayelekile yomkhiqizo
Ungawusebenzisa kanjani umkhiqizo - kufaka phakathi ubude bomjikelezo, isilinganiso samadoda nabesifazane, nengxenye yokuphila komkhiqizo.
Yini ongakufaka ngayo
Uma udinga i-PCT ngalo mkhiqizo.
Ngabe uzobe uthola imikhiqizo eminingi?
Sizama ukuvuselela uhla lwethu ngemikhiqizo emisha kaningi ngangokunokwenzeka, okusho ukuthi sichitha isikhathi esiningi sizama ukwenza imikhiqizo emisha ephelele, ngakho-ke gcina amehlo akho ehlutshiwe!
Ingabe unikela ngesaphulelo esithe xaxa sokuthenga ngobuningi?
Abasabalalisi bethu Amalebhu Wokwakha Omzimba afuna abathengisi abaningi. Sicela ubone https://bodybuiltlabs.co.uk/a/wsg/proxy/signup Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Ngazi kanjani ukuthi imikhiqizo yakho isemthethweni?
KwaSarmsStore, sigcina kuphela imikhiqizo yangempela nevumelekile, asithengisi amafake, ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi into oyitholile ingeyoqobo. Sinemiphumela yelabhu yangaphandle etholakala kuwebhusayithi yethu, ekhasini lomkhiqizo esigabeni sesithombe.
Kodwa-ke, uma ungeneme ngokuphelele ngento yakho, wamukelekile ukuyibuyisela kithi ukuze uthole imbuyiselo ephelele, inqobo nje uma umkhiqizo ungavulwanga.
Ngabe imikhiqizo yakho isemthethweni?
Yonke imikhiqizo yethu ihlolelwa ubumsulwa futhi imiphumela itholakala kuwebhusayithi yethu. Kuxhunywe lapha: https://sarmsstore.co.uk/
Ingabe imikhiqizo yakho iyasebenza?
Singabathengisi abakhulu bamaSARM eYurophu imikhiqizo yethu ingukuhlanzeka okuphezulu ongakuthola. Ukubuyekezwa kwethu kuwebhusayithi yethu, iTrust Pilot nezinkundla kufanele zikunikeze ukuzethemba.
Ingabe uyabuyisa imali yokulethwa kwemali uma ngibuyisa okuthile?
Yini okufanele ngiyenze uma ukubuyiselwa kwemali kungalungile?
Siyaxolisa impela uma senze iphutha ngokubuyiselwa kwemali kwakho!
Uma kunjalo sicela uxhumane nathi usebenzisa ku- sales@sarmsstore.co.uk futhi sizozama ukukuhlelela wena ngokushesha okukhulu.
Kungani ngingakatholi ukubuyiselwa kwemali kwami?
WenaUkubuyiselwa kwemali kungathatha phakathi kwezinsuku zokusebenza eziyi-5-10 ukucubungula ungene ku-akhawunti yakho uma sekwenziwe. Sicela ulinde lesi sikhathi esabiwe ngaphambi kokuxhumana nathi.
Ngiyikhasimende lase-UK, ngabe uzitholile izinto zami ezibuyisiwe?
Imvamisa kungathatha izinsuku ezifika kwezingu-7 zokusebenza (ngaphandle kwezimpelasonto namaholide asebhange) kusukela ngosuku olulandela usuku owabuya ngalo, ukuze iphasela lakho libuyiselwe endlini yethu yokugcina impahla bese licutshungulwa.
Sizokuthumelela i-imeyili ngokushesha nje lapho sithola ukubuyiselwa kwakho, sikwazisa ngezinyathelo ezilandelayo.
Iyini inqubomgomo yakho yokubuyisa?
Sithemba ukuthi uyakuthanda ukuthenga kwakho kwaSarmsStore. Kodwa-ke, uma ungajabuli ngokuthenga kwakho, noma kungahlangabezani nezimfuneko zakho, ungayibuyisela kithi.
Izinto kufanele zibuyiswe zisesimweni sazo sangempela futhi zingavulwa, kungakapheli izinsuku ezingama-30 kusukela ngosuku owathola ngalo. Singanikela ngokubuyiselwa kwemali okuphelele ngentengo oyikhokhile.
Uma usibuyisela umkhiqizo ngoba awulungile, sizobuyisa izindleko zakho zokuposa kuphela uma into ingalungile ngephutha kithi hhayi uma umkhiqizo u-ode ngokungafanele nguwe.
Ngeminye imininingwane ngokubuyisa kwethu, sicela ubheke ikhasi lethu: https://sarmsstore.co.uk/pages/refund-policy
Ngingakhokha ngisebenzisa i-PayPal?
Njengamanje asiyemukeli i-Paypal ngewebhusayithi yethu.
Yiziphi izinhlobo zokukhokha ozamukelayo?
Samukela wonke amakhadi amakhulu wesikweletu nawasebhange, kanye ne-bitcoin.
Ngingakhokha uma ngithola umkhiqizo?
Inkokhelo izothathwa kwi-akhawunti yakho ngesikhathi ofaka ngaso i-oda lakho.
Kungani ikhodi yesaphulelo ingasebenzi?
Sicela uqinisekise ukuthi ufake ikhodi yesaphulelo kahle esigabeni sesaphulelo, kufanele ubone isengezo sesaphulelo ku-oda lakho lapho sisetshenziswe kahle.
Ngikhokha malini ngokuthumela?
Sinikeza ukuthunyelwa kwamahhala emhlabeni wonke. Siyayinikezela insizakalo ekhokhelwayo, okuya ngezimali nemikhawulo yezwe lakho, eqinisekisa ukuthi iphasela lakho lizothunyelwa ngokushesha.